Baradhada sii kordheysa ee gobolka Novosibirsk - majaladda "Nidaamka Baradhada"
- Evgeny Leshchenko, Wasiirka Beeraha ee Gobolka Novosibirsk
Dhulka: 177,76 kun sq. kiiloomitir
Dadka: 2 798 170 qof, oo 79,21% ka mid ahi ay deggan yihiin magaalada.
Booska joqoraafi ahaan: Gobolka Novosibirsk wuxuu ku yaal koonfur-bari Galbeedka Galbeed ee Siberia. Waqooyiga, waxay xuduud la leedahay gobolka Tomsk, koonfur-galbeed - Kazakhstan, galbeedka - gobolka Omsk, koonfurta - Altai Territory, bariga - iyo Kemerovo.
Cimilada qaarad ahaan, aad uga daran meelaha Yurub iyo Ameerika oo isku lool. Afarta xilli ee sanadka ayaa lagu dhawaaqaa. Jiilaal daran oo dhaadheer oo leh baraf xasilloon oo ka bilaabmaya 20 cm koonfur-galbeed ilaa 50-70 cm waqooyiga, xilliyada qaar dabaylo xoog leh iyo duufaanno baraf wata. Celcelis ahaan heerkulka Janaayo: -18 ... -20 ° С. Jiilaal waa kuleyl, laakiin xoogaa gaaban - laga bilaabo 90 illaa 100 maalmood waqooyiga iyo ilaa 120-130 maalmood koonfurta. Bisha ugu kulul waa Julaay (+ 19 ... + 25 ° С).
Xilliyada kala guurka (gu'ga, deyrta) way gaaban yihiin waxaana lagu gartaa cimilo aan degganeyn, soo noqoshada cimilada qabow. Qabowgu wuxuu dhulka ka bilaabmaa qeybta labaad ee Sebtember waxayna dhammaadaan dhammaadka Maajo.
Celceliska roobabka sanadlaha ah waa 414 mm (laga bilaabo 290 ilaa 540 mm). Ilaa 70% roobabku waxay ku dhacaan qaabka roobka, inta badan waa kuwo wata duufaanno. Kuwaas, 20% waxay dhacayaan Maajo-Juun, gaar ahaan, muddada u dhexeysa Abriil illaa Oktoobar waxaa jira (celcelis ahaan) 330 mm roobab, muddada u dhexeysa Nofeembar illaa Maarso - 95 mm. Koonfurta iyo galbeedka koonfurta dabaylo ayaa ka xoog badan. Dabaylo qalalan iyo abaaro ayaa lagu arkay gobollada koonfurta tallaabada. Xilliga sii kordhaya: laga bilaabo 144-148 maalmood waqooyiga illaa 158-163 maalmood koonfurta.
Relief: inta badan fidsan. Qayb ka mid ah gobolka, oo ku taal dhinaca bidix ee Wabiga Ob, waxaa deggan dhul bannaan oo hooseeya (120 m oo ka sarreysa heerka badda) oo leh gargaar u eg manka oo ah 3-10 m Bangiga midig ee Ob waa mid aad u sarreeya oo buuro badan. Bariga gobolka waxaa kuyaala wiishka Salair oo leh meesha ugu sareysa gobolka (502 m oo ka saraysa heerka badda).
Ciid: inta badan kayda loo yaqaan 'podzolic' iyo 'cirro'. Sababtoo ah qoyaanka qayb muhiim ah oo ka mid ah gayiga gobolka, cusbada dhagxaanta carrada samaysa iyo biyaha dhulka hoostiisa, carrada cusbada ayaa si ballaadhan loogu horumariyey halkan: seeraha-chernozem, seeraha, bogagga, marsooyinka milixda, milix cusbada iyo malafta.
Aagga dhulka Beeraha: 7752,475 kun hektar.
Gobolka Novosibirsk ayaa kaalinta shanaad kaga jira Degmada Federaalka Siberia marka laga hadlayo wax soo saarka baradhada. Ku saabsan sida ay muhiim ugu tahay dhaqankani gobolka iyo inay jiraan rajo wax soo saar kordhin ah, waxaan kala hadlaynaa Wasiirka Beeraha ee Gobolka Novosibirsk E.M. Leshchenko.
- Evgeny Mikhailovich, baradhada lama odhan karo waa dalagga ugu muhiimsan ee gobolka Novosibirsk. Laakiin wali miyuu fadhiyaa meel si muuqata caan uga ah waaxda dalagga?
- Sannadka 2019, aagga dalaggan ee dalaggan ee dhammaan qaybaha wuxuu u dhigmay 19,7 kun hektar, sannadka 2020 waxyar kayar - 18,3 kun.Qaddarka guud ee goosashada ee sannadka 2019 wuxuu ahaa 299,4 kun tan.
Waxa kale oo aan jecelahay in aan ogaado in dhammaan gobollada gobolku ay ku hawlan yihiin beerista baradhada. Sannadkii 2019, waxsoosaarkii ugu sarreeyay waxaa laga helay gobolka Novosibirsk - 47,9 kun tan, Ordynsky - 30 kun oo tan, Moshkovsky - 26,3 kun tan.
Haddii aan ka hadalno waaxda warshadaha, ka dib 2019 ururrada beeraha iyo beeraleyda beeraleyda ah ee gobolka waxay u qoondeeyeen 3,6 kun hektar dhir baradho ah. Qiyaasta guud ee aruurinta waxay ahayd 72,5 kun tan. Celceliska waxsoosaarka waa 213,3 c / ha.
Sanadkii 2020, baradhada waxaa lagu beeray dhul cabirkiisu dhan yahay 2736 hektar.
Wadar ahaan, 13 ka mid ah shirkadaha beeraha, 32 beeraley (beeraley) iyo shaqsiyaad ganacsato ah ayaa ku howlan beero baradho ee gobolka. Dhammaantood waxay si firfircoon u isticmaalayaan teknoolojiyada beerashada casriga ah.
Dareenka ugu weyn ee dalaggan (waxay ka kooban yihiin 67,6% wadarta mugga baradhada ee laga soo saaray shirkadaha beeraha, beeraleyda beeraleyda ah iyo ganacsatada shaqsiga ah) waxaa bixiya: ZAO SPH "Yarkovskoe", IE Leonidov AP, OOO LEONiS, OOO OPH "Dary Ordynska", LLC "Gardens of the Giant". Faa'iidada ugu sareysa ee soo saarista baradhada waxaa lagu gaaray LEONiS LLC (268,8%), Sady Giganta LLC (121,4%), SIBKRA LLC (120,7%).
- Ma jiraan barnaamijyo goboleed lagu taageerayo baradhada ka baxda gobolka Novosibirsk?
- Iyadoo la raacayo wareegtada Dowlada Novosibirsk ee taarikhdu tahay 02.02.2015 Lambarka 37-p "On barnaamijka gobolka ee gobolka Novosibirsk" Horumarinta beeraha iyo nidaaminta suuqyada wax soo saarka beeraha, alaabta ceeriin iyo cunnada ee gobolka Novosibirsk "waxaa jira liistada talaabooyinka taageerada gobolka ee laga kabo federaalka. iyo miisaaniyadaha gobolka: dib u bixinta qayb ka mid ah kharashka dhismayaasha shaqooyinka cilmiga leh, dib u bixinta qayb ka mid ah kharashka iibsiga kuwa ugu caansan iyo abuurka asalka ah, soo celinta qayb ka mid ah kharashka soo iibsiga qaab farsamo iyo qalab.
- Waa maxay noocyada baradhada inta badan laga beero gobolka? Wax soo saarkii abuurka baradho miyaa la horumariyay?
- Sida laga soo xigtay macluumaadka ay bixisay laanta Hay'adda Miisaaniyadda ee Dawladda Federaalka "Rosselkhoztsentr" ee gobolka Novosibirsk, oo ku saleysan falanqaynta warbixinta miraha la beeray muddo saddex sano ah (2018-2020), noocyada ugu caansan ee beeraha beeraha ee gobolka Novosibirsk waa: Gala, Tuleevsky, Rozara, Red Scarlett, Lina.
Gobolku wuxuu daboolayaa baahidiisa alaab tayo sare leh. Sib-NIIRS (laanta ICG SB RAS), KFH "Nastenka", ZAO SPH "Michurinets" waxay ku takhasuseen kobcinta baradhada miraha gobolka.
- Shirkad PepsiCo ayaa laga furi doonaa warshad wax soo saarka jajabyada gobolka Novosibirsk. Shirkadaha beeraha diyaar ma u yihiin inay beeraan noocyo baradho ah?
- Dabcan, soo saarayaasha beeraha ayaa helay qorshayaasha PepsiCo ee ah in warshad wax lagu farsameeyo laga dhiso gobolkeenna iyadoo xamaasad weyn leh. Mustaqbalka, beero badan ayaa jeclaan lahaa inay noqdaan mid ka mid ah alaab-qeybiyeyaasha ugu waaweyn. Marka la eego, sanadka 2020, beeraleyda gobolka waxay kordhiyeen aagga beero baradhada.
Dabcan, dhamaanteen waan fahamsanahay in soosaarka badeecadan oo kale ay u baahan tahay aqoon dhab ah iyo xirfado, laakiin dadku waxay diyaar u yihiin inay wax bartaan.
Bishii Nofeembar 2019, intii lagu jiray bandhigga caalamiga ah ee beero-warshadaha "Toddobaadka Agrarian ee Siberia", waxaa la abaabulay miis wareeg ah "Teknolojiyada isku-dhafan ee lagu kobcayo baradhada baradhada", oo kulmisay soo saarayaal badan oo daneynaya beeraha Kaqeybgalayaasha wareega ah waxay heleen macluumaad badan (oo ay kujiraan wakiilka PepsiCo) oo kusaabsan xeerarka diyaarinta carrada, waxyaabaha gaarka u ah abuurka iyo goosashada baradhada. Oo waxaan u maleynayaa in tani aysan ahayn dhacdadii ugu dambeysay ee nuucaan ah.
- Sanadkii 2017-18, warbaahintu waxay daabacday macluumaad ku saabsan abuurista koox baradho ah oo Ruush-Shiino ah oo ka tirsan gobolka Novosibirsk. Mashruucan ma sii socon doonaa?
- Nasiib-darro, sannadihii u dambeeyay, wax-soo-saarkii baradhada ee gobolka ayaa hoos u dhacay sababo dhawr ah awgood. Heerka isku-filnaanshaha sheyga waa 84,0% (isticmaalka shakhsiga ah ee qiyaasta 94,1 kg qofkiiba). Markaan xisaabta ku darsano, abuuritaanka koox baradho Ruush-Shiino ah oo gobolka ka mid ah ayaa hadda loo aqoonsaday mid aan khusayn. Laakiin si kastaba ha noqotee, ma joojinayno mashruucan waxaanna hubaal ku noqon doonnaa tixgelinteeda marka isku filnaanshaha baradhada ay gaarto 100%.
- Shirkadaha beeraha ee Novosibirsk miyey baradho siiyaan dibada?
- Sida laga soo xigtay Waaxda Adeegga Federaalka ee Xannaanada Xoolaha iyo Kormeerka Caafimaadka, in 2019, soosaarayaasha beeraha ee Novosibirsk waxay dhoofiyeen ilaa 60 tan oo baradho ah. Gaarsiinta waxaa loo sameeyay Jamhuuriyadda Kazakhstan. Tirooyinku way yar yihiin, laakiin mustaqbalka waxaan qorsheyneynaa inaan kordhinno xaddiga dhoofinta iyo inaan gacan ka geysano soo-saareyaasha beeraha ee doonaya inay ka shaqeeyaan jihadaan (waxaa horayba loo sii waday taageerada mashruuca gobolka ee "Dhoofinta wax soo saarka beeraha").
- Nidaamka keydinta baradhada ma laga sameeyay gobolka?
- 27 ka mid ah shirkadaha beeraha ayaa leh awoodo u gaar ah oo ay ku keydin karaan khudaarta iyo baradhada gobolka, wadarta guud ee keydku waa 60,4 kun oo tan. Isla mar ahaantaana, saddex shirkadood waxay leeyihiin dhismooyin waaweyn oo kayd ah oo u oggolaanaya gelinta alaabada xaddiga 15-16,5 kun tan.
Waqtigan xaadirka ah, dib u dhiska xarunta keydinta baradhada (oo qaadi karta 12 kun tan) JSC SPH "Yarkovskoye" ayaa socota.
- Sannadkii 2015-kii, gobolka Novosibirsk wuxuu u dabaal-degay sannad-guuradii 120-aad ee ka soo wareegtay bilowgii shaqadii dib-u-dhiska ee loo yaqaan 'Barabinskaya steppe'. Gobolku ma saami buu ku leeyahay hagaajinta dhulka maanta? Aagga dhul waraabka ah miyuu korayaa?
- Tan iyo 2015, waxaan hirgelinaynay barnaamij hoosaad ka tirsan barnaamijka gobolka "Horumarinta dib u soo celinta dhulka beeraha ee gobolka Novosibirsk". Muddadan, shirkadaha beeraha waxay heleen 108,9 milyan oo rubi oo ah kaalmo dowladeed, oo ay kujiraan 77,9 milyan oo rubi iyadoo la adeegsanayo miisaaniyadda federaalka, 31,0 milyan oo rubi iyadoo la adeegsanayo miisaaniyadda gobolka, 5 nidaamyo wax ka bedel oo wadarta guud ee waraabka la dhisay lana dhisay. 1,9 kun hektar.
Bedka dhulka waraabka ah ee gobolka Novosibirsk waa 36,9 kun oo hektar, kuwaas oo 35,8 kun oo hektar ay yihiin dhul beereed.
- Warbaahintu wax badan ayey ka qortaa abaaraha ka jira gobolka Novosibirsk sanadkan. Miyay xaaladaha cimilada adag saameyn ku yeelan doonaan goynta baradhada?
- Bilowgii Agoosto, habka deg degga ah ee heer degmo oo ay ugu wacan tahay qalajinta ciidda ayaa lagu soo rogay 17 ka mid ah 30 degmo ee gobolka, badankooduna waxay ku yaalliin koonfurta iyo koonfur-galbeed ee gobolka. Qiimaynta waxyeelada ayaa hada laga wadaa meelaha ay dhibaatadu saameysey. Meelaha ay ka jiraan xaaladaha degdegga ah, xarun ayaa loo sameeyay si ay isugu dubbarido ficilada una ururiso macluumaadka hawlgalka. Xarunta dhexe, iyadoo lala kaashanayo madaxda ururada beeraha, madaxda beeraleyda beeraleyda, shaqsiyaadka ganacsatada ah ee ku howlan howlaha beeraha, waxay qaadaan talaabooyin lagu yareynayo waxyeelada. Sida iska cad, ma jiri doono goosasho diiwaangashan sanadkan, laakiin xaaladda beeraha baradhada ma ahan mid aad u daran: xilligan la joogo, lama sheegin geerida wax beero baradho ah.
Tags: 2020 .3Soosaarka baradhadaGobolka Novosibirsk